DHARKA UGU SARREEYA EE DABACASAHA DHUL FURAN: QARSOODIGA HELITAANKA GOOSASHADA HODANKA AH - SOOSAARKA DALAGGA
Bacriminta iyo quudinta dabacasaha dhul furan
Caato, macaan, gaajo, hodan ku ah fiitamiinada iyo walxaha raadraaca, sida karootada lagama maarmaanka ah. Dhaqanka khudraddan, muuqaalka ayaa u dhigma qaybta gudaha. Karootada saafiga ah, ballaaran, casiir leh waa calaamad muujinaysa in ciidda beeritaanka xididka si sax ah loo doortay, iyo dhismayaasha bacriminta si fiican ayaa loo doortay.
Dhadhanka khudradda ayaa si toos ah ugu tiirsan nafaqooyinka, walxaha raadraaca iyo qoyaanka inta lagu jiro xilli sii kordhaya. Wixii macaad ah ee xididka waxaad u baahan tahay inaad sameyso 2-3 supplements xilli.
Waa muhiim! Marka aad bacarimiso sariiraha dabacsan waxaad u baahan tahay inaad xasuusato qiyaasta. Karootada ma jecla quudinta xad-dhaafka ah, tani waxay ka dhigeysaa dhadhankiisa iyo muuqaalkeedu ka sii daraa, iyo wakhtiga kaydinta hoos u dhacdo.
Sida loo quudiyo dabacasaha bannaanka u furan
Dharka ugu sarreeya ee dabacasaha dhulka u furan - Tani waa mid ka mid ah qodobada muhiimka ah ee helitaanka goosashada qani ku ah. Karootada - khudradda quruxsan furfurious, si degdeg ah uga jawaab celin la'aanta nafaqada iyo xad-dhaafka.
Karootada beerta waxay ku habboon tahay dhirta sida basasha, digirta, radishes, salaar, isbinaajka, digirta, yaanyada, dhirta, dhir iyo buro.
Bacriminta macdanta waxaa lagu dabaqaa ciidda 20 maalmood ka hor beerashada loogu talagalay. Goobta diyaarka ah samee isku dar ah nitrogen iyo fosfateate, ka dibna qodo sariir.
Potassium waxaa la soo geliyaa ciidda mar dambe, marar badan oo ah qaab isku jira walxo dareere ah, tan iyo qaabkan waxaa si sahlan loo nuugo geedka. Wixii dhar ah oo leh potassium, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo iskudhafyada aan lahayn-chlorine, maadaama koloriin la yareeyo dhirta.
Wixii koritaanka wanaagsan ee dalagga xididka, arrinka organic waxaa loo soo bandhigay ciidda xilliga dayrta, laakiin haddii dhaqanka koray meeshan ayaa la bacrimiyay humus - waa ikhtiyaari ah in la keeno dhar sare oo dheeraad ah, waa nafaqo ku filan carrada.
Qiyaasta iyo compost ayaa ku kordhiya 7 kg halkii 1 sq. mitir Haddii aysiidhka ciidda ka sarreeya 5.5, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo shaqooyinka deoksaydhka adoo ku dariqiraya dabayl, ash ama burka dolomite dhulka.
Waa muhiim! Hordhac siman oo lime iyo nafaqo leh ee ciidda waa wax aan la aqbali karin. Waa inay jirtaa mudo ah 3-4 toddobaad inta u dhaxaysa hababkaas.
Bacriminta bacriminta (Doodwanaaga, shimbiraha) lama isticmaalin karootada, maadaama uusan saameyn ku yeelaneynin kororka wax soo saarka khudradda sannadka ugu horreeya, laakiin wuxuu saameeyaa qodobbada koritaanka dhirta wuxuuna gacan ka geysanayaa xaqiiqda ah in dalagga aasaasiga ah uu lumiyo bandhiggiisa
Dharka ugu sarreeya marxaladaha
Walax kastaa wuxuu muhiim u yahay abuurista khudradda quruxda badan iyo tayo sare leh. Faa'iido ama maqnaansho xubno raadraac ah ayaa saameyn xun ku leh horumarinta xididka.
Diyaarinta ciidda beeritaanka
Goobta beeritaanka xididka waa inay bilaabaan inay diyaariyaan xilliga dayrta. Humus ama compost (10 litir 1 mitir oo laba jibaaran) waa in lagu daraa ciidda saboolka ah, sida balka, peat iyo ciidda lagu daro ciidda culus, iyo duufaanta.
Guga, toddobaad ka hor beerashada loogu talagalay, dhulka ayaa la qoday, dardar geliyey iyo waraabiyay biyo kulul. Ciidda la diyaariyey waxaa lagu daboolaa caag balaastig ah - uma oggolaan doonto in dhulka uu qalalo oo uu ku caawiyo inuu diiriyo ciidda.
Bacriminta inta lagu guda jiro beereed
Haddii sababo aanad waqti u lahayn inaad bacrimiso sariiraha karootada mustaqbalka, ka dibna tan waxaa la samayn karaa isla markiiba ka hor beerashada:
In xal loo diyaariyey 1 litir oo biyo ah oo lagu daro 1 tbsp. ash xaabada qoryo ku rid bac ah oo ka mid ah miraha dabacasaha, ka dibna dareeraha ku hay hal maalin. Abuurka la qooyay waa la qalajiyey waxaana lagu beeray dhulka hoostiisa filimka.
Biyaha la kariyay ee caadiga ah ee la kariyey ee burka. In koollada la qaboojiyey waxaa la barbardhigay Bacriminta macdanta for dabacasaha, ku dar miraha ee xididka iyo tuujin leh saliinge macmacaan galay grooves diyaarisay.
Seeds waxa kale oo lagu dhufan karaa: rumeria, blueberries, basasha Indian, lisianthus, clivia, adenium, arugula, ash buur (aronia) madow, fennel iyo aglaonemoya.
Sida loo bacrimiyo karootada geedi socodka koritaanka
Gogolka ugu horeeya ee bacriminta macdanta waxaa la siiyaa muuqaalka ka mid ah 2-3 xaashida, sida caadiga ah, waxaa la isticmaalaa ka dib markii khafiifinta sariiraha. Meelaha yaryar, waxaa fiican inaad isticmaasho isku darka dareeraha ah.
Wixii karootiga quudinta koowaad u isticmaal: 10 litir oo biyo ah, 25 garaam oo amooniyam ah, 30 garaam oo superphosphate ah, 30 garaam oo cusbo ah potassium. Miisaankani waa inuu ku filnaadaa 10 mitir sariirood.
Ma taqaanaa? Laga soo bilaabo 1991, dabacasaha Midawga Yurub waxaa loo tixgeliyaa midho. Waad ku mahadsantihiin dadaalada Bortuqiiska, go'aanka ayaa lagu ansixiyey kaas oo dabacasaha loo aqoonsaday mid miro ah. Tani waxay sababtay xaqiiqda ah, sida waafaqsan xeerarka yurubiyaanka ah, waxaa loo ogol yahay inay samayso macaanka oo keliya miraha iyo berry, iyo Bortuqiis laga bilaabo xididka oranjka ah si aad u macaan macaan macaan.
Cuntada labaad. Qabashada ka dib 20 maalmood oo ka mid ah Halabuurka.
Labbiska saddexaad qaadeen noocyada dambe ee khudaarta 20 maalmood ka dib labaad, oo aan lahayn Bacriminta oo ku jira nitrogen.
Dharka ugu sarreeya ayaa loo baahan yahay in la sameeyo ka dib markii waraabinta ugu weyn ama roob kadib, sidaa darteed dhammaan nafaqooyinka lagama maarmaanka u ah carrada.
Wixii beerashada dalagga xidid, waxaa lagama maarmaan ah in la xusho barta barta furan, iyada oo aan lagu qancin inta lagu jiro saacadaha iftiinka. Dalagga xididka, beeray aag madow, waa yar yahay, jilicsan. Ciidda beeritaanka waa in ay noqotaa iftiin, oo leh saameyn dheecaan leh.
Haddii muuqaalka muuqaalka dhirta aadan fahmin taas oo ka mid ah maqnaanshaha geedka - sameynta quudin dhamaystiran, hase yeeshee hoos u dhigno diiradda ka kooban hal-abuurka.
Waraabiyo dhirta ayaa ugu fiican subixii hore. Heerkulka biyaha ee la waraabiyo waa inay ku kala duwanaadaan inta u dhaxeysa 20-25 ° C. Khudaarta ma jecla waraabin badan, laakiin iyaga oo aan lahayn koritaanka warshadu waa wax aan macquul ahayn.
Ma taqaanaa? Joe Atherton ayaa kor u kacay dabacasaha ugu dheer aduunka. Miisaankiisu wuxuu gaadhay 581 cm.
Marka waraabiyo waa lagama maarmaan in la xakameeyo heerka qoyaanka ciidda, waa inay la siman tahay dhererka khudradda.
Karootada quudiya waa lagama maarmaan Waxay lagama maarmaan u tahay kobaca buuxa, nafaqada, korodhka cimilada iyo adkeysiga. Muuqaalka, dhadhanka iyo muddada kaydinta ee dabacasaha waxay ku xiran tahay si sax ah loo kala doorto iyo waqtigeeda marinnada.